Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » एमालेको घोषणापत्रः ५ मिनेटमा एनिटभीमा
एमालेको घोषणापत्रः ५ मिनेटमा एनिटभीमा
जसको नीति- उसको नेतृत्व ! कसको नीति, कसको नेतृत्व? एमालेको नीति एमाले कै नेतृत्व !!!
हामी तपाईको मतको मात्र हैन मनको समेत प्रतिनिधित्व गर्दछौं । त्यसैले एमालेको नीति र एमाले कै नेतृत्व स्थापित गर्न सूर्य चिन्हमा मतदान गर्न विनम्र अपिल गर्दछौं ।
हामीहरू फेरि संविधानसभाको निर्वाचनको सँघारमा उभिएका छौं । नेकपा (एमाले) राष्ट्र तथा जनताले हाम्रो पार्टीसँग राखेका अपेक्षा पूरा गर्न पूर्ण निष्ठा, क्षमता र इमान्दारिताकासाथ समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
संविधानसभा जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्ता प्रकट हुने समुन्नत लोकतान्त्रिक विधि हो । विगत संविधानसभाको असफलताको मुख्य कारण त्यसको प्रतिकूल संरचना र शक्ति सन्तुलन पनि थियो । एमाले जस्तो क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व नहुँदा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरी नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुम्न पुग्यो ।
राजतन्त्र अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुनु, पूर्वमाओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन हुनु, ८० प्रतिशत विषयमा आम सहमती रहेको संविधानको मस्यौदा तयार हुनु चार बर्षको अवधिमा संविधानसभाबाट भएका महत्वपूर्ण उपलव्धी हुन् । यी उपलव्धी, हाम्रो पार्टीको संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र– २०६४ सँग मिल्दाजुल्दा छन्। यो अधुरो कामलाई पूर्णता दिन एमालेको प्रतिबद्धता र मार्गचित्र यसप्रकार छ–
संविधानसभाको पहिलो बैठकमा
विगत संविधानसभाले गरेका काम र सहमतिहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
विगत संविधानसभाबाट गरिएका सहमतिहरूलाई नयाँ संविधानमा निरन्तरता दिन दलहरूबीच नयाँ सहमतिका लागि विशेष पहल गर्ने ।
संविधानसभाको प्रक्रियाबाट समाधान हुन नसकेका विषयहरूलाई जनमत सङ्ग्रहका माध्यमबाट टुङ्गो लगाई एक बर्षभित्र संविधान जारी गर्ने ।
सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक सहमतिमा निरन्तर जोड दिने ।
विवादका रूपमा रहेका संवैधानिक प्रश्नहरूलाई निम्न दृष्टिकोणका आधारमानयां संविधान निर्माण गर्ने ः
बहुपहिचान सहितको सङ्घीयता र सहभागितामा आधारित समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसदबाट निर्वाचित आलङ्कारिक राष्ट्रपति रहने शासकीय प्रणाली ।
अधिकार सम्पन्न संवैधानिक अङ्ग र स्वतन्त्र न्यायपालिका ।
सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र ।
सुखी नेपाली र समतामूलक समृद्ध नेपाल, एमालेको भिजन हो । २०५१ सालको अल्पमतको सरकारदेखि भिन्न धारका शक्तिहरुसँगको संयुक्त सरकारमा रहेको बेलामा एमालेले बिर्सन नसकिने कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ । तसर्थ, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण लक्षित देहायका लक्ष्य प्राप्तिको लागि हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहनेछ–
‘आफ्नो गाउँ–आफैं बनाउँ’लाई निरन्तरता दिंदै प्रत्येक गाविसमा ५० लाख अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । ‘नौ–स’ अभियानलाई पुनः सञ्चालन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपियाँ विन्यास गरिनेछ ।
५ वर्षमा ५ लाख घरबारविहीन परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
निरक्षरता पूर्णरूपमा अन्त्य गरिनेछ । अनुत्पादक शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गरी शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गरिनेछ ।
प्रतिबर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ‘एक घर– एक रोजगार’को कार्यक्रम लागू गरि कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चित गरिने । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र सीपयुक्त बनाइनेछ ।
योगदान आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र लगानी मैत्री लचकताबाट श्रमिक र उद्यमी–व्यवसायी बीच सहअस्तित्व कायम गर्ने काम हुनेछ ।
तत्कालका लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई जीवन निर्वाहको आवश्यकता सम्मत हुने गरी वृद्धि गरिने छ ।
खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ । सम्पूर्ण नागरिकमा स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच स्थापित गरिनेछ ।
आधारभूत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पूर्णरूपले निःशुल्क गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । विकट क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था गरी सुत्केरी आमाहरूको संरक्षणगर्दै मातृ मृत्युदर शून्यप्रायःमा झारिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका सम्पूर्ण बालबालिकालाई कुपोषणबाट बचाइनेछ ।
आधुनिक ऊर्जामा सबै जनताको पहुँच पु¥याइनेछ । लोडसेडिङ पूर्णरूपमा अन्त्य हुने ।
सबै जिल्ला सदरमुकाम कालोपत्रे सडकबाट जोडिनेछन् । कम्तीमा ९५ प्रतिशत गाउँ, बस्ती सडक सञ्जालबाट जोड्ने । मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
युवाका लागि ‘उपयोगी शिक्षा – फलदायी रोजगारी’ को विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बेरोजगार युवालाई भत्ता दिइनेछ ।
वंश र अंशमासमान हक स्थापना गर्दै सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने ।नयाँ संविधानमार्फत राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र सभामुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
अबिलम्ब स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।स्थानीय निकायमा पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको लागि पहल गर्ने।
सबै व्यक्तिहरूमा सञ्चारको सुविधा पु¥याइनेछ ।
मुलुकको सङ्घीय संरचनालाई ध्यानमा राखेर तदनुरूप पूर्वाधारको विकास गर्ने अभियान अगाडि बढाइनेछ ।विकासशील मुलुकको मापदण्ड अनुरूपको बस्ती विकास गर्न २४० निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा नमूना गाउँको विकास गरिनेछ ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउनुका साथै पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थललाई सम्पन्न गरिनेछ ।
नेपालको सामाजिक विविधता झल्किने जातीय सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ । नारायणहिटी सङ्ग्रहालयलाई नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम झल्किने गरी विकास गरिनेछ।
एमाले यो पनि घोषणा गर्दछ ः
१. समस्याको वार्ताद्वारा समाधानका लागि विभिन्न विकल्प खोज्ने सङ्कल्प गर्दै – हामी कहिल्यै नेपाल बन्द गर्ने छैनौं !
२. राजनीति पेसा होइन, सेवा हो । पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गरी अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्धका आधारमा राजनीति सञ्चालन गर्ने स्थिति अन्त्य गर्नका निम्ति एमाले सक्रिय पहलकदमीमा उत्रिनेछ !!